नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जापानमा दुई दिन नबित्दै फेरि अर्को ठुलो भुकम्प गयो, सुनामी आउने चेतावनी पछी जनजिबन झनै त्रसित !
जापानमा दुई दिन नबित्दै फेरि अर्को ठुलो भुकम्प गयो, सुनामी आउने चेतावनी पछी जनजिबन झनै त्रसित !
जापानको कुमामोटो-शि नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाई ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ स‍ंस्था युएसजिएसले जनाएको छ। सिन्ह्वाका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै समुद्र रहेको हुनाले सुनामीको
चेतावनी पनि जारी गरिएको छ। हिरोशिमा सहर नजिकैको यो ठाउँमा केन्द्रबिन्दु बनाई स्थानीय समय अनुसार बिहान १ बजेर २५ मिनेटमा भूकम्प गएको हो। त्यही क्षेत्र आसपास बिहीबार पनि ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अघिल्लो भूकम्पमा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार भग्नावशेषबाट एक ८ महिने बालिकालाई जीवितै उद्दार गरिएको सिएनएनले जनाएको छ।